Epsilon Variant Archives - Harley Street Clinic Fitsaboana manokana any London
Hatramin'ny volana septambra 2021 efa ho 70% of UCL patients who tested positive for COVID-19 had the Epsilon variant.
Amin'ny vondrom-piarahamonina ambany tahan'ny vaksiny, indrindra ny faritra ambanivohitra izay voafetra ny fidirana amin'ny fikarakarana, the Epsilon variant could be even more damaging. Ity dia efa hita manerantany amin'ny firenena mahantra izay tsy azo idirana ny vaksinin'ny COVID-19. Nilaza ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana fa azo tsapain-tanana izany vokany izany mandritra ny am-polony taona ho avy.
“Tranga famakiana,”Izay mahazo ny olona vita vaksiny feno COVID-19, dia mbola heverina ho tsy fahita firy, even with UCL, araka ny UCL, fa raha voan'ny vaksiny kosa ny olona, afaka mamindra ilay virus izy ireo. (Ny UCL dia manohy manombatombana ny angon-drakitra raha misy olona tratry ny trangana fitsangatsanganana tsy manana soritr'aretina afaka manaparitaka ny viriosy.)
The most important thing you can do to protect yourself from Epsilon is to get fully vaccinated, hoy ny dokotera. Amin'izao zava-misy izao, midika izany raha mahazo vaksinina doka roa toy ny Pfizer na Moderna ianao, ohatra, tsy maintsy mahazo ny tifitra roa ianao ary avy eo miandry ny fe-potoana tapa-bolana naroso mba hahomby ireo tifitra ireo.
Ny olona vita vaksiny feno dia mety hamindra amin'ny hafa, but the UCL also reports the amount of viral genetic material may decrease faster in vaccinated people—so, raha hita kosa fa mitondra virus mitovy amin'ny orona sy tendany amin'ny olona tsy vita vaksiny, Ny fandinihana dia nahita ihany koa fa mety hanaparitaka viriosy vetivety izy ireo noho ireo izay tsy vita vaksiny.